ထူးဆန်းသောအလင်းတန်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ထူးဆန်းသောအလင်းတန်းများ
Posted by cobra on Oct 9, 2012 in Myanma News | 11 comments
ဘာအလင်းတွေမှန်းမသိရတော့ ကြည့်နေသောလူတော်တော်များများ ပြောကြသည်မှာစလိုက်မီးထိုးနေတာသည်ကောက်ချက်ချနေကြသည်။
စလိုက်မီးသည် ကောင်းကင်မှာထင်ရလောက်အောင်ပင် အဝေးသို့ရောက်နိုင်သလား ရွှေတိဂုံစေတီနှင့်လှည်းတန်းကုန်းကျော်တံတားတည်ဆောက်နေရာတွင်သုံးသော
စလိုက်မီးကြီးများသည်တောင် ကောင်းကင်တွင်အထင်းသားမပေါ်ပါ။သိသောပညာရှင်များ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
အလင်းများက၁ခုတည်းမဟုတ်ပါ ၃၊၄ခုလောက်ရှိသည်။အလင်းများသည်ငြိမ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ စက်ဝိုင်းပုံရွေ့ လျားနေခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခါ အဲဒီလိုမျိုးထပ်တွေ့ တဲ့အခါကြရင်
“ တို့ ရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုဟ်သားတွေ…. တို့ ရဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂြိုဟ်သားတွေ… ”
ကျုပ်လည်း မြင်ခဲ့ရသဗျို့ …
ကျုပ်က သုဝဏ္ဏ ဘောကွင်းနားမှာလေ ..
အိုက်ဒါ .. အစကတော့ ဘောလုံးကွင်းက အရောင်တွေလားလို့ ..
သေချာကြည့်တော့ ဟုတ်ဘူး ..
ဓာတ်မီးနဲ့ ထိုးသလိုမျိုး …
အချို့ကတော့ ပြောကြတယ် …
မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်ပျံ ရှာတာဆိုလား၊ စလိုက်မီး စမ်းတာဆိုလားပဲ ….
ကျုပ်လည်း ဘာမှန်း သိဘူး ….
ခုန မိုးမရွာခင် (၉း၁၅) အထိမြင်နေရတယ် ။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် အနီးအနား ကလိုဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပြန်ဘူး ။ဆလိုက်လို့ ဘဲ ထင်ပါတယ် ။ဘယ်ကလဲတော့ မသိပါ။
ရန်ကုန်မြို့ တော်တွင် သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျှက်ရှိသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး ရောင်ခြည် ကွန့်မြူးနေသည်ဟု သတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိပဲ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အနောက်ဘက်မုဒ်ရှိ ဆလိုက်မီးများ စမ်းသပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော် လျှပ်စစ်မီးဌာန၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက The Voice Weekly သို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တတ် ဘောလုံးကွင်းကပါ။ စတိတ်ရှိုးလုပ်နေတာပါ။လို့ တွေ့မိပါတယ် ။ အဲ့ဒါ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အလင်းရောင်တန်းကို အဲ့ဒီ့ဘက်က လာတာ တွေ့ ရတာပါ ။ ဘုရားဘက်က မဟုတ်ပါဘူး ။
အဲဒါကို စတွေ.တုန်းကတော.အရမ်းထူးဆန်းလွန်းလို. ပုဂံပြားပျံတွေဘာတွေမှတ်ပြီး လူတွေလျှောက်ပြောနေကြသေးတယ်။ သိချင်လွန်းလို. သွားကြည်.တော. မှ သံလမ်းမှတ်တိုင်က ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးကွင်းက စတိတ်ရိူးလား ဘာလားတော.မသိဘူး။ မီးတွေက အဲဒီကထွက်လာတာပါ။ အတိအကျပဲ။ ကဲကဲဘာမှမစိုးရိမ်နဲ.တော.။ ရွှေတိဂုံစေတီကဆလိုက်မီးဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ လျှောက်ပြောနေတာ။ မယုံဘူးဆိုရင်သံလမ်းမှတ်တိုင်ကလူတွေကိုလာမေးလို.ရတယ်။ သံလမ်းမှတ်တိုင်ဆိုတာ အင်းစိန်-ဆူးလေ လမ်းမပေါ်ကမှတ်တိုင်ကိုပြောတာ။
ဒီဘောလုံးကွင်းကထွက်တဲ. ဆလိုက်မီးတွေက လူတွေတော်တော်များများကို အံသြသွားစေတယ်ဆိုတာကို အဲဒီဘောလုံးကွင်းကလူတွေတောင်သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ.လူတွေတော်တော်များများတော. စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ခဲ.တယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ.။ အမှတ်တမဲ.မှ အမှတ်တရလေး တခုပေါ.။
Battle Ship ဒုတိယ ပိုင်းကို ရန်ကုန်မှာလာရိုက်တာပါ ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့နော်